Malunga nathi -Baoding Xueruisha Feather And Down Products Co, Ltd.
Iintsiba zeXueruisha kunye neMveliso esezantsi Co, Ltd.
Sikwenye yezona ntsiba zikhulu kwaye zisezantsi kwimizi-mveliso yase China-Baiyang Lake, Baoding, Hebei eMantla China. Xueruisha Feather And Down Products Co., Ltd.inamava amahle ekuveliseni iintsiba kunye neemveliso ezantsi, kubandakanya ezantsi i-quilts, phantsi kwemiqamelo, iintsiba kunye noomatrasi abaphantsi, iingxowa zokulala ezantsi, iimpahla ezisezantsi kunye nabanye. Inkampani yethu ineeseti zemigca yemveliso kwi-eiderdown kunye nakwiziphumo ezingamawaka asibhozo eetoni ngonyaka. Iimveliso zethu zinokufikelela kuMmiselo waseTshayina wokuthumela ngaphandle. Ngenxa yoyilo lwethu olulodwa kunye nomgangatho ophezulu, iimveliso zethu zithengiswe kakuhle eMelika, eYurophu, eJapan naseKorea. Amandla ethu imveliso ifikelela iziqwenga ngaphezu kwezigidi ezithandathu ngonyaka. Iimveliso zethu ziyacetyiswa kakhulu kwintengiso yasekhaya kwaye ziphumelele amabhaso eMveliso yePhondo yeNqanaba lokuQala, iMveliso yokuQala yokuQala kuZwelonke, iMveliso yokunyaniseka ngabaThengi kunye neBrand eyaziwayo yePhondo le-Hebei ngomgangatho. Sifumene isiqinisekiso se-ISO9001 ngo-2009. "Imfezeko, ukuzinikela kunye nokuyila" ibingumoya wethu kule minyaka ili-11 idlulileyo. "Umgangatho olungileyo, ulawulo olufanelekileyo kunye nenkonzo yabathengi" ngumbono wethu wenkonzo.
Ngo-1973, umseki wethu kunye nomongameli, Jianhong Liu wazalelwa usapho yomlobi kwi Dazhangzhuang Village, Anxin County, kwiPhondo Hebei. U-Liu waya kumzi-mveliso osezantsi e-Anxin County wayokusebenza njengomsebenzi wokukroba uboya. Ukucheba iinwele kwakungumsebenzi onzima kwaye odinisayo. U-Liu khange adambe okanye adlale emtyibilizi. Uvuke kwakusasa wabulisa ebumnyameni wasebenza nzima. Ukhawuleze waphumelela uxabiso kunye nentembeko kumphathi wefektri. Wanyuselwa kwi-accountant kwisithuba esingaphantsi kwesiqingatha sonyaka.
Ngo-1992, nge-Yuan engama-20 000 ayigcinileyo kumsebenzi wesingxungxo kunye nephupha lokuqala ishishini, wazimanya nabahlobo bakhe ukuya emazantsi esiXeko saseGuigang, eGuangxi, kwaye waqalisa ukuthengisa ifilimu eluhlaza kunye nentengiso yentengiso. Emva kweminyaka emithathu yokusebenza nzima, ngo-1995, u-Liu oneminyaka engama-22 ubudala wayenezigidi zemali, kwaye waba ngumnini omncinci weDazhangzhuang Village evela kusapho oluhlwempuzekileyo. Wayethembele ekusebenzeni nzima nakwinkuthalo yokumba "imbiza yokuqala yegolide".
Ngo-1999, uLiu wabhalisa iJinlida Down Products Factory, wabhalisa uphawu, kwaye wangena ngokusemthethweni kwicandelo lemveliso. Wangena kwimarike iinyanga ezininzi, ehlalutya ngenyameko imarike, kwaye waqulunqa imveliso kunye nezicwangciso zokuthengisa. Ngokwefilosofi yeshishini, besisoloko sinyanzelisa ukuba "siphumelele abathengi ngokuthembeka kwaye siphuhlise iimarike ngobulumko". Njengoko inkampani ikhula, uhlala ecinga ngayo: Ukuze ibe nkulu, inkampani kufuneka ijonge kwimarike nakwilizwe liphela.
Iqhekeza leentsiba ezincinci alinawo umxholo ophantsi wobugcisa. U-Liu ukhokele inkampani ukuba inyanzelise ekuveliseni ngokungqongqo ngokungqinelana nemigangatho yamanye amazwe. Zithe zakuphuma iimveliso ezantsi, zamkelwa ngabathengi zaza zaphumelela "iMveliso yeSizwe eGqwesileyo", "i-Hebei Famous Brand", "i-Hebei Famous Brand", kunye ne "Consumer", "Abo bangayithemba imveliso", " ikhontrakthi kunye neyunithi ethembekileyo "namanye amabhaso.
Ngo-2003, Liu ngokusesikweni walitshintsha igama Jinlida Phantsi Products Factory ukuba Anxin County Liteshu Phantsi Products Co., Ltd., kwaye yandisa iintlobo imveliso phantsi uphawu "Liteshu", ukusuka idyvet yokuqala eyodwa ukuya iibhedi zokulala, iimveliso ezininzi ezinje ngeebhatyi eziphantsi kunye neetafile ezantsi. Ngo-2005, "uLiteshu" bonke baphumelela i-ISO9001: 2000 yokuqinisekisa umgangatho wenkqubo yolawulo lomgangatho. "I-Liteshu" iphumelele ukuthembela ngomgangatho, yafumana inani elikhulu leodolo, kwaye yaqala ukungena kwimakethi yamanye amazwe. Ukuthengiswa kwemveliso yenkampani kwafikelela ngaphezulu kwamaqhekeza angama-100,000 ngaloo nyaka, kwaye ixabiso lazo ladlula kwi-Yuan yezigidi ezingama-50.
Ngo-2006, inkampani yase "Liteshu" kunye ne-France Saint Laurent • Xueruisha (International) Garment Co, Ltd. yajoyina imikhosi ukubhalisa nokuseka i-Baoding Xueruisha Down Products Co, Ltd., kwaye yasungula uthotho lweemveliso "brand Xueruisha".
NgoMeyi 27, 2014, iXueruisha Down Products Co., Ltd. yadweliswa ngempumelelo njengenkampani yokuqala eBaoding ukufika emhlabeni kwibhodi ephambili yeSixeko saseShijiazhuang. Kule minyaka ingama-20 idlulileyo, iXueruisha Down Products Co, Ltd. ithengile, yaqhubekeka yathengisa phantse iitoni ezingama-50 000 zeentsiba; ivelise kwaye ithengise iimveliso ezizizigidi eziyi-2.2. Zonke ezi zinto zenza ukuba uLiu abe nokuzithemba kuphuhliso lwenkampani kwikamva.
Nge-1 ka-Epreli 2017, zafika iindaba zokusekwa kweSithili seXiong'an esitsha. Njengosomashishini ongumfama owayesebenza nzima evela emazantsi, uLiu Jianhong wayevuya ngokwenene ngamathuba ophuhliso kwidolophu yakhe, kwaye kwangaxeshanye, wayecinga nzulu malunga nendlela yokwenza igalelo kulwakhiwo lwesithili esitsha.
Njengosihlalo we-Hebei Down Industry Chamber of Commerce, u-Liu uvakalise ukuba uyakuxhasa ngokupheleleyo ukwakhiwa kwesithili esitsha kwaye akhokele ekuthobeleni izigqibo zokwenza isithili esitsha. Kwangelo xesha, ngokungqinelana neemfuno zesithili esitsha, sidityaniswa neempawu zesithili esitsha, siya kwenza konke okusemandleni ukulungiselela inguqu kunye nokuphuculwa kweshishini.
Nge-Okthobha i-25, i-2020, kwimeko yomjikelo omtsha wophuhliso lwe-leapfrog kwiSithili esitsha sase-Xiong'an, i-Anxin County Cross-border E-commerce Industry Association iyahambelana nophuhliso lwamaxesha kunye neemfuno zemeko, phantsi ubunkokheli obuchanekileyo beofisi yohlaziyo nophuhliso, kunye nabo bonke oosomashishini Ngenkathalo nenkxaso yethu, nangemizamo edibeneyo yamalungu onke, indibano yokuqala yabanjwa kwiholo yemisebenzi emininzi yaseXueruisha nge-25 ka-Okthobha. Lo ngumsitho omkhulu ukuphuculwa notshintsho kumashishini emveli kwiXiongan District eNtsha.
U-Liu, umongameli we-Xueruisha Co, Ltd., wanyulwa njengosihlalo. Usihlalo uLiu uthe ukusekwa kombutho kuluncedo kakhulu kuphuhliso lwe-Anxin kunye ne-Xiong'an yomda we-e-commerce. Njengelungu lomzi mveliso, uya kwabelana ngezixhobo zakhe, ixesha kunye namava kutshintsho lwenkampani, kunye nokuxhamla kunye neenkampani ezingamalungu, kwaye ngokudibeneyo ukwakha iqonga lenkonzo ekumgangatho ophezulu.
Kwiminyaka yakutshanje, inkampani inikele ngaphezulu kwe-2 yezigidi zeYuan eluntwini kwaye yanikela ngaphezulu kwe-10,000 yeebhatyi ezantsi. It wawongwa isihloko "Advanced Advanced ngabanye" nguRhulumente wePhondo Hebei Abantu kwi-Donation kwezemfundo kunye "Charity Enterprise" yi Anxin County Charity Federation.
Ibali lethu liza kuqhubeka…